Malaga yaabaa in warbixinta Ciraaq ay albaabka u furto in la maxkamadeeyo Tony Blair? - iftineducation.com
Malaga yaabaa in warbixinta Ciraaq ay albaabka u furto in la maxkamadeeyo Tony Blair?
iftineducation.com – Natiijada baaritaankii mudada dheer la sugayay ee ku saabsanaa dowrkii ay UK ku laheyd gelitaankii iyo qabsashadii Ciraaq ayaa waxaa uu bannaanka soo dhigay sida dowladda Britain ay arrintaasi ugu lug laheyd.
Warbixinta oo ay soo saareen guddi uu horkacayay Sir John Chilcot, ayaa lagu sheegay in Ra’iisul Wasaarihii hore ee Britain Tony Blair iyo dowladdiisuba ay dagaal ku qaadeen Sadaam Xuseen sanadkii 2003-dii iyagoon marka hore isku dayin qaab nabadeed inay arrinta ku xaliyaan.
Haddaba warbixintan malaga yaabaa inay albaabka u furto in la maxkamadeeyo Tony Blair?
Su’aashaas iyo kuwa kale ayaannu hordhignay Dr Axmed Cali Maxamed Kheyre, oo ku xeel dheer qawaaniinta caalamiga ah, khadka taleefanka ayuu ugu warramay Cabdifitaax Ibraahim Cagayare.
Boolis lagu laayay magaalada Dallas